Samachar Batika || News from Nepal » ध्यान गर्दा पुग्छ यस्ता चमात्कारीक फाईदाहरु:
ध्यान गर्दा पुग्छ यस्ता चमात्कारीक फाईदाहरु:
तपाईको स्वभाव कस्तो छ ? कुनैपनि कुरा एकाग्र भएर गर्न सक्नुहुन्न ? जति पढेपनि तपाईले पढेको कुरा सम्झन गा’ह्रो हुन्छ ? तपाईलाई आफ्नै जीवन देखेर दि’क्क लाग्छ ? सानो कुरामा पनि त‘नाव धेरै हुन्छ ?
यदी यस्ता स’मस्याहरुमा पी’डित हुनुहुन्छ भने यी स’मस्याबाट छुट्कारा पाउने सजिलो उपाय हामी तपाईलाई सिकाउँछौं । र त्यो उपाय हो नियमित रुपमा ध्यान गर्नु ।
तपाई हाम्रो काम, जीवनलाई सफल बनाएर खुसी रहन चाहनुहुन्छ भने दैनिक रुपमा ध्यान गर्ने बानी बसाल्नुस् । दैनिक रुपमा ध्यान गर्दा तपाईको जीवनशैलीमा सकारात्मक परिवर्तनहरु आफै आउने छन् ।
ध्यान गर्ने बानीले तपाईको स्मरण शक्ति बलियो हुन्छ, एकाग्रता बढाउँछ, त्यतिमात्र होइन, त’नाव व्यवस्थापन गर्ने र खुसी रहने शक्ती पैदा गर्छ । ध्यान प्रमुख रूपमा कसैको मनलाई प्रशिक्षित गर्ने एउटा कार्य हो, कुनै गुणलाई महसूस गर्नको लागि वा आफै स्वयंको रूपमा बुझ्नको लागि एउटा माध्यम हो । यसको उद्देश्य आफ्नै चेतनालाई बढाउने एउटा निश्चित विधा हो ।
विभिन्न प्रकारको ध्यानमा सचेतना र ध्वनिमा आधारित ध्यान पनि हुन सक्छ । जबकि धेरै समय अगाडि, ध्यान केहि व्यक्तिहरूका लागि एउटा स्थान थियो, आज यसको लाभको लगातार बढ्दै गएको शोधको साथै ध्यान एउटा एक अभ्यास बनिरहको छ जसले कुनै पनि व्यक्तिलाई अगाडि बढ्न मदत गर्छ ।
ध्यानको एउटा विशेषताहरू मध्ये एक हो तपाईको भ’ट्कि रहेको मनलाई द’बाउनलाई कुनै पनि खालको दबाव दिँदैन । के आवश्यक छ भने तपाई आफ्नो दिमागलाई हेर्नुहोस् र यो यो भट्की रहेको पनि हेर्नुहोस् र विस्तारै यसलाई आराम गर्न दिनुहोस् । यसरी तपाई आफ्नो ध्यानको चरणको अन्तमा कुनै अवशिष्ट चि’न्ता बाँकी रहदैन ।
ध्यानले पुग्ने फाइदा
हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमताहरूमध्ये हाम्रो स्मृति हो । तपाईको मस्तिष्क र शरीरमा अत्यधिक मात्राको तनावले कार्यस्थल र घरको मागको कारणले गर्दा तपाईको स्मरण गर्ने क्षमतामा न’कारात्मक प्रभावको उच्च सम्भावना हुन्छ ।
यो ध्यान जागरुक दिमागमा केन्द्रित हुन सक्छ जहाँ ध्यानको ध्यान एक विशेष शारीरिक संवेदनामा हुने गर्छ । यसले तपाईको दिमागलाई शान्त गर्छ र हातमा मात्र ध्यान केन्द्रित हुन सिकाउँछ, त्यसैले तपाईको दिमाग अधिक तीव्र र चाँडै सम्झन सक्षम हुन मदत गर्छ ।
त’नावसँग सम्झौता गर्न
त’नाव जुनसुकै व्यस्त सहरहरूमा आफ्नो जीवनको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको लागि मन्त्र हो । अफिसमा हतारमा पुग्नुदेखि डेडलाइनमा काम गर्नुसम्म र थ’कित भइ घरमा गाह्रो काम तल्लीन भइ आफूलाई खोज्नु प्राय मानिसहरूलाई यो एउटा दैनिक जीवनको शर्त हो ।
ध्यान तपाईको आफ्नो शरीरको उर्जाको तपाईकै नियन्त्रणमा ल्याएर मजबूत तरिकाबाट तनाबको सामना गर्न दिन्छ र यो तरिकाबाट तपाई उनीहरूलाई प्रभावित ढंगले च्यानलाइज गर्न शक्ति दिन्छ ।
भर्खरै गरिएको एउटा चिकित्सा अध्ययन, विशेष रूपमा जुन २०१० मां मोन्ट्रियलमा आयोजना गरिएको थियो जसमा देखाएको थियो कि जेन ध्यानको अभ्यास मस्तिष्कको यसतो तरिकाले संरचना गर्छ कि यसको भावना अरु दु’खाइसँग लड्ने क्षमता बढाउदै जान्छ ।
मुख्य रूपमा बौद्ध भिक्षुहरूद्वारा यो अभ्यास गर्ने जेन ध्यानको रूप जुनमा तपाई आफ्नो सास र आसनको बारेमा ध्यान केन्द्रित गरेको हुनुपर्छ र आफ्नो मनलाई विस्तारै विस्तारै शान्त बनाउनुपर्छ । यो तरिकाबाट तपाईले ती पे’नकिलरहरूलाई पर राख्न सक्नुहुन्छ र दु’खाइ कम गर्न आफू जन्मिदा हुने क्षमतालाई बढाउन सकिन्छ ।
प्रीफ्रन्टल कोर्टेक्स दिमागको एउटा भाग हो जुन सकारात्मक भावना र भावनासँग सम्बन्धित हुन्छ । ध्यान गर्ने मान्छेको यस क्षेत्रमा धेरैभन्दा पनि धेरै गतिविधि गरेका देखेका छन् ।
प्रमुख पत्रिकाहरु र शोध संस्थाहरुले डि’प्रेशनलाई कम गर्न र ध्यानमा केंद्रित गरेको छ र यो पत्ता लगाउको छ कि ध्यानले व्यक्तिको आफ्नो जीवनको नियन्त्रण गर्ने महसूसको लागि मदद गर्छ र त्यसैले, डि’प्रेशन र न’कारात्मक सामना गर्नको लागि भावनाहरू अधिक क्षमताको बनाउने गर्छ ।
हृ’दयको लागि राम्रो
तपाईको हृ’दयको सुचारु कामको लागि दुई लाभकारी ध्यानका प्रकार छन् जुन हो जेन र ट्रान्सेन्डेन्टल ध्यान हो। ट्रान्सेन्डेन्टल ध्यान, यसको नामको अनुसार, तपाईलाई चि’न्ता ध्यानको मार्फत् आफ्नो चिन्ताहरू पार गर्न मद्दत गर्छ ।
दैनिक ध्यान गर्नाले ४० प्रतिशत भन्दा बढी स्ट्रो’क र हृ’दयघातको सम्भावना कम गर्न मद्दत गरेको पाइएको छ ।
प्रकाशित मिति ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार १६:०८